Ao amin’ny renivohitr’i Azerbaijan, miditra amin’ny ady teknolojika ifanaovan’ny andian-taranaka tsy mitovy ireo mpamily fiarakaretsaka · Global Voices teny Malagasy
Mpamily fiarakaretsaka an'arivony ao Baku manao ankivy an'ilay fampiharana.
Voadika ny 27 Jolay 2021 2:18 GMT
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary niandohana.
Ny Chaikhana.media no namoaka voalohany ity tantara manaraka ity ary naverin'ny Global Voices navoaka indray noho ny fifanekena fiarahamiasa.
Efa ho 20 taona izao i Afgan Maharramov, 54 taona, no mpamily fiarakaretsaka eny an'arabe afovoan'i Baku. Izy no hany mpampidi-bola ho an'ny ankohonany. Saingy i Afgan, tahaka ireo hafa mpamily fiarakaretsaka hatrizay, dia sahirana mitolona mifaninana amin'ireo fampiharana vaovao natao ho an'ny fiarakaretsaka. Lazainy fa miha-manjavona tsikelikely tsy hita eo amin'ny tsena ny asan'ireo fiarakaretsaka hatrizay, mampananosarotra ny fahitàna fivelomana ho an'ireo mpamily tahàka azy.
Nanomboka tamin'ny lohataonan'ny 2020, misy arivo any ho any ireo mpamily miasa ao Baku no manao ankivy an'ilay fampiharana ho an'ny fiarakaretsaka. Natsangan-dry zareo ihany koa ny Fikambanan'ireo Mpamily Fiarakaretsaka mba hiarovany ny zon'ireo mpamily fiarakaretsaka ao anatin'ireo vanimpotoan'ny finday avo lenta izao.
Ireo hafa, toa an'ilay tanora mpamorona, Rahim Khoyski, dia mino fa ny fampiharana natao hifampizaràna fiara no tompon'ny hoavy. Rahim, mpamily fiarakaretsaka fahiny, dia namorona ny fampiharana ho azy manokana ho an'ireo mpamily sy mpandeha fiarakaretsaka. Ny lahatsary eto ambany, amin'ny fiteny Azerbaijaney nasiana dika amin'ny fiteny anglisy, no milaza ny tantaran-dry zareo.